Ciidamada Danab oo weerar culus ku Qaaday Degaanka Mubaarak iyo Daarulsalaam
HomeWararka SomaliyaKoonfur GalbeedCiidamada Danab oo weerar culus ku Qaaday Degaanka Mubaarak iyo Daarulsalaam
January 18, 2022 Koonfur Galbeed 0
Ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa howlgal qorsheesan oo ka dhan ah dagaalyahanada Al Shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaano katirsan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaanada Mubaarik iyo Daarusalaam.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Somaliyeed Gen. Odowaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in Hawlgalka intii u socday lagu dilay 13 xubnood oo katirsan Al Shabaab oo isugu Jiray horjoogeyaal iyo dagaalyahano.
Waxa uu sidoo kale sheegay Jen Odawaa in howlgalka lagu burburiyey qaraxyo Al Shabaab ku diyaarinayeen deegaanadaasi, isaga oo intaa raaciyay in ciidamada la wareegeen qaarkoodna bur buriyeen Gaadiid iyo Mootooyin ay Al Shabaab adeegsan jireen.
Taliyaha ayaa ugu mahadceliyey Ciidanka AMISOM iyo kuwa Mareykanka oo gacan wayn ka gaystay hawlgalkan ay Danab fuliyeen, waxaana uu sheegay in hawlgalkaani uu qeyb ka yahay halwgalada dalka looga ciribtirayo Al Shabaab.
Al Shabaab ayaana wali wax war ah kasoo saarin warkan kasoo baxay taliyaha ciidanka xoogag dalka , waxaana mudooyinkii ugu dambeeyay ciidamada kumaandooska Soomaaliya Shabeelaha Hoose ka fulinayeen howlgalo gaadmo ah.
Madaxweynaha Soomaaliland oo Usafray Dalka Dibadiisa
Gudiga QabanQaabada Doorashada Gudoomiyaha Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka oo la Magacaabay